प्रधानमन्त्री ओलीले २४ लाखको केक काटेर जन्मदिन मनाइरहँदा बुवा गेटमा अलपत्र (भिडियोसहित) — Imandarmedia.com
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फागुन ११ गते आफ्नो ६७ औं जन्मोत्सव मनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा केक काटिरहदाँ उनलाई जन्मदिने बुवा मोहनप्रसाद ओली भने गेटमा अलपत्र परेका थिए ।
बिहिबार राती नै बालकोटस्थित घरमा केक काटेर जन्मदिन मनाएका ओलीले शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा अर्काे केक काटेर बर्थ डे मनाएका थिए । शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकलगतै ओलीले आफ्नो बर्थ डे केक काटेका हुन् । ओलीको बर्थ डे केक खान भारतीय राजदूत, चिनिया राजदूतदेखि एमाले नेता कार्यकर्ताहरुको भिड देखिन्थ्यो ।
तीन दिन अघि मात्रै झापाबाट छोराको जन्मदिनका लागि काठमाडौं आएका पिता यसरी निवासबाहिरै अलपत्र पर्नुमा दोष कसको ? के प्रधानमन्त्री बनेको छोरोले आफ्नै जन्मदिनमा बुवालाई सम्झेन ? या बुवा आफुलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन झापाबाट काठमाडौं आएको कुरा केपी ओलीलाई थाहा थिएन ?
देशको नेतृत्वजो जिम्मा लिएर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले आफ्नै बुवाको यो अवस्था देखेनन् या देखेर पनि नदेखेझैं गरे ? यो भिडियो हेर्ने आम नेपालीको मनमा यस्तै प्रश्नहरु उठेका छन् ।
ओलीको बर्थडेमा कति खर्च ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली वालुवाटार प्रवेशसँगै भोजको श्रृङखला शुरु भएको थियो। तीन दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवासमा दुई वटा भोज दिएका थिए । फागुन ८ गते दिएका ओलीले शुक्रवार ११ गते भने आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा भोज दिएका हुन्।
अपरान्ह ४ वजे सुरु भएको ओलीको जन्म दिनको पार्टी खान बालुवाटारमा रहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको हलमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि एमाले कार्यकर्ताहरुको भीड लागेको थियाे।
ओलीको जन्मदिन मनाउन बालुवाटारमा ५ सय जनालाई बोलाईएको सचिवालयले जनाएको छ। ओलीको भोजको अनमोल क्याटरिङले खानाको व्यवस्था गरेको थियाे।
ओली प्रधानमन्त्री भएको दश दिनमा दिन दिनै जस्तो विभिन्न बहानामा साना ठूला भोजहरु हुदै आएको छ । पछिल्लो दश दिनमा मात्रै भोजमा करिव २५ लाख रुपैया सकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतको दावी छ ।
ओलीको जन्म दिनको भोजमा अनमोल क्याटरिङले ह्विस्की, वियर र वाइनको समेत व्यवस्था गरेको छ । भोजमा विभिन्न मन्त्रालयका दर्जनभन्दा बढि सचिवहरु समेत सहभागी थिए ।
सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्रीले दिने दिवाभोज, रात्रिभोज र अन्य खाजा खर्च सरकारी कोषबाट भुक्तानी हुने गर्दछ । अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्वमा रहँदा पनि ओलीले सरकारी कोष खर्चेर कैयन भोज दिएका थिए।